Iindaba -Umatshini weSandblast ozenzekelayo weMabhile, iglasi, ipleyiti yesinyithi, ipleyiti yentsimbi
Oluzenzekelayo umatshini Sandblast for uqhushe emarmore, iglasi, ipleyiti yesinyithi, ipleyiti yesinyithi
Olu luhlu luvela kumatshini wenqwelomoya othumelayo othwala uhlobo lwesandlight, isantya sokuhambisa esikhoyo soguquko lolawulo lwedijithali
Isantya seSandblasting, umgangatho wokuqhubekeka uzinzile, kulula ukusebenza.
2. Beka i-workpiece kwibhanti yokuhambisa ngexesha lokusebenza, kwaye umsebenzi we-sandblasting ugqityiwe ngokuzenzekelayo, nto leyo ilula kwaye ilula ngakumbi.
3 Spray umpu ujingi radian zinokulungiswa ubungakanani.
4 Cofa umpu kunye nesitshizi semipu, ungabekwa ngokobungakanani be workpiece, kwaye unokwenza ukujikeleza ngee-degrees ezingama-720, ukuze zonke iintlobo zomsebenzi wesanti zisebenze.
5.Equipped kunye umatshini enkulu ukususwa uthuli kunye ezizodwa esirhabaxa nothuli isahluli, unako ukwahlula esirhabaxa nothuli, unako ukunciphisa ukusetyenziswa esirhabaxa, ungcoliseko lokusingqongileyo. Iirrasives zinokurisayikilisha ngokuzenzekelayo.
6 Lo matshini woluhlu uxhotyiswe ngamaqela ama-2 ukuya ku-10 emipu yokutshiza, umpu ngamnye wokutshiza unolawulo olwahlukileyo, luxhotyiswe ngemipu emi-2 ukuya ku-12, kunokunciphisa ukuqhubekeka komsebenzi oqhotyoshelwe ngezinto zentlabathi.
7 Ngokutsho ubungakanani isiqwenga somthengi, imilo kunye nemveliso kunye noyilo ezifanelekileyo le mveliso umatshini ezizodwa, lo matshini nako kwakhona mayixhotyiswe izixhobo ukuqokelela uthuli ezimanzi ngokwemfuno isiqwenga somthengi.
Umatshini wonke usebenzisa i-Siemens PLC ulawulo oluhlanganisiweyo, ukusebenza okulula kunye nokulula.
Ukususwa kothuli kusetyenziswa ukususwa kothuli oluzenzekelayo, kunye nezinto ezili-9-16 eziphambili zokucoca ulwelo, ukuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo.
Ukusetyenziswa kwemathiriyeli yesanti: isalumina sand (corundum sand), silicon carbide (green silicon carbide, black silicon carbide)
ubuhlalu beglasi, i-walnut silicon, isanti ye-resin, amasuntswana eplastiki (isanti yenayiloni), ubuhlalu be-ceramic, ubuhlalu bentsimbi, isanti yentsimbi, ubuhlalu obungenasici, ubuhlalu bealuminiyam, njl.
I-11.USES: ifanelekile i-ceramic tile, i-marble, iglasi, ipleyiti yesinyithi, ipleyiti yesinyithi, ipleyiti yealuminium, iprofayile yealuminium, iqokobhe elibamba ikhompyuter, iqokobhe lekhompyuter yelitye, ilitye, njl.